I-Lynnhaven Inlet Maintenance Dredging, i-Navigation Dredging Case Study
I-Lynnhaven Inlet Federal Navigation Channel Ihamba Ngokuzulazula Ngemuva Kwephrojekthi Yokuphiswa Kwezigidi ezingama- $ 2
Isifunda saseNorfolk, i-VA, se-US Army Corps of Injiniya sesimemezele ukuthi iLynnhaven Inlet Federal Navigation Channel iyakwazi ukuzulazula ngokugcwele ngemuva kwephrojekthi yokulungiswa kokulungiswa kwemali eyizigidi ezingama- $ 2 yokususa izimo ezibucayi ezibangelwe yiSiphepho iSandy e2012.
AbakwaCorps bathola lo msebenzi kuSouthwind Construction Corporation, owafika ngaphambi kwesikhathi kanye nangesabelomali, kusho u-Andy Reid, omele ihhovisi lesivumelwano saseNorfolk. ISouthwind isebenzise i-16 ″ Ellicott Series 970 cutter dredge yayo, efanekiselwe ngenhla, ukwenza lo msebenzi.
Ukwehliswa kwesondlo kuphinde kwaveza ukusetshenziswa okuhle futhi nokubekwa kwamamitha ayi-cubic angama-112,000 esihlabathi kumamitha angu-6,500 ogwini, ukusuka eLynnhaven Inlet kuya endaweni eseduze neChic's Beach eVirginia Beach, VA, eduze komlomo weChesapeake Bay. "Idolobha laseVirginia Beach lijabule kakhulu ngokusebenza kwesiFunda saseNorfolk kule nkontileka," kusho uPhill Roehrs, PE, ongunjiniyela wemithombo yamanzi eVirginia. “Umgwaqo wamanzi obalulekile osebenzisa umcengezi usuliwe kukho konke ukudonswa, futhi isihlabathi esisuswe kulesi siteshi sabekwa kolunye lolwandle lwethu olugugulekayo ukuze kugcwaliswe kabusha. Ihamba phambili kuwo womabili la mazwe. ”
ILynnhaven Inlet minyaka yonke iyaqhubeka nokugcinwa kabusha ukuze kulwisane nokudonsa kanzima. Kodwa-ke, ngenxa yomthelela weSiphepho uSandy ogwini lwaseVirginia Beach, izimo zokudonsa zaba zimbi kakhulu futhi zadinga ukusheshiswa kabusha, kusho uKristin Mazur, umphathi wephrojekthi weSifunda saseNorfolk.
"Ucwaningo luhlolisise ukushuba kwesiteshi," kusho uMazur. "Lokhu kududulwa, uma bekungashiywa wedwa, bekungaba nomthelela omubi ezimbonini ezahlukahlukene zasolwandle, futhi kusongele ukuhamba ngemikhumbi okuphephile nokusebenzayo."
Le projekthi ivame ukudinga imijikelezo yokulungiswa okuphelele yeminyaka emithathu, ihlinzeka ukufinyelela eChesapeake Bay nase-Atlantic Ocean ngemikhumbi yokudoba yokuhweba, izikebhe zokudoba ngezikebhe, izikebhe ezihamba ngezinyawo kanye nemikhumbi ehlukahlukene yokuzijabulisa. Lesi siteshi sisetshenziswa izikebhe zokushayela zombili iziteshi zomshayeli weVirginia neMaryland ngaphakathi esigcawini ukuthutha abashayeli bezindiza besuka esikhumulweni semikhumbi kuya emikhunjini ejulile engena eChesapeake Bay isuka e-Atlantic.
Qala Iphrojekthi Yakho Yesondlo Yesiteshi Nge-Ellicott